Sustainable Development - Progressive Voice Myanmar
Home Our Work Sustainable Development
Thematic Priority – Sustainable Development
Since reforms began, the narrative of Myanmar being the ‘last economic frontier’ has facilitated floods of foreign investment as the economy continues to liberalize. Yet the legal framework is not strong enough to protect vulnerable populations and the environment from adverse effects of potentially exploitative and damaging investments and the risks of perpetuating inequality and irreversible social and environmental damage. Destructive natural resource extraction, land confiscations, and poor working conditions in industrial zones, are justafew of the problems that are endemic. In consultation and partnership with community-based organizations, we advocate for an economic development that is sustainable, equitable and guarantees the protection of the human rights, peace and human security of poor and vulnerable populations against the economic interests of powerful private sector and military actors.
ဦးစားပေးအကွောငျးအရာ။ ။ ရရှေညျတညျတံ့ခိုငျမွဲသညျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု
ပွုပွငျပွောငျးလဲရေးမြား စတငျဆောငျရှကျခြိနျ မှစတငျကာ မွနျမာနိုငျငံသညျ “နောကျဆုံး စီးပှားရေးနယျပယျ” အဖွဈ ကမ်ဗညျးထိုးခံရပွီး စီးပှားရေးလြှော့ပေါ့တံခါးဖှငျ့မှုမြား ဆကျလကျဆောငျရှကျခွငျးနှငျ့အတူ နိုငျငံခွား ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု လှိုငျးလုံးအား သယျဆောငျပေးခဲ့ပါသညျ။ သို့သျောလညျး ဥပဒရေေးရာ မူဘောငျမှာမူ မတျောမတရား ခွယျလှယျကာ ထိခိုကျမှုမြားလညျး ဆောငျယူလာနိုငျခွရှေိသညျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြားအန်တရယျမှ ထိခိုကျလှယျ အားနညျးသူ ပွညျသူ လူထုနှငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြအား ကာကှယျမှုပေးနိုငျရနျ လုံလောကျခိုငျမာမှု မရှိသေးသညျ့အပွငျ မညီမြှမှုမြား ဆကျဖွဈနိုငျခွနှေငျ့ ပွနျလညျပွုပွငျရနျမလှယျသညျ့ လူမှုရေးနှငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ပကျြစီးမှု ဖွဈနိုငျခွေ အန်တရာယျမြားမှာ မွငျ့မားလှပါသညျ။ ထိခိုကျပကျြစီးစသေညျ့ သဘာဝသယံဇာတ ထုတျယူမှုမြား၊ မွယော သိမျးဆညျးမှုမြားနှငျ့ စကျမှုဇုံမြားရှိ နိမျ့ကသြော လုပျငနျးခှငျအခွအေနမြေားမှာ ဆိုးရှားစှာဖွဈနသေော ပွဿနာပေါငျး မြားစှာထဲမှ အခြို့သာဖွဈပါသညျ။ မိမိတို့အနဖွေငျ့ လူထုအခွပွေုအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ တိုငျပငျအကွံဉာဏျရယူခွငျး၊ ပူးပေါငျးလကျတှဲလုပျကိုငျခွငျးတို့ဖွငျ့ ရရှေညျတညျတံ့ခိုငျမွဲ၍ သာတူညီမြှမှုရှိပွီး သွဇာကွီးမားသညျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူမြား၊ စဈတပျနှငျ့ဆကျနှယျနသေူမြား၏ စီးပှားရေးအကြိုးအမွတျ မြှျောမှနျးမှုရနျမှ ထိခိုကျလှယျ အားနညျးသူ လူထုအသိုငျးအဝိုငျးမြား၏ လူ့အခှငျ့အရေး၊ ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့လူသားဘဝလုံခွုံရေးတို့ကို ကာကှယျပေးရေးအား အာမခံသညျ့ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုအတှကျ စညျးရုံးလှုံ့ဆျော လုပျဆောငျပါသညျ။
ရှပွေ့ေးအသံအဖှဲ့မှ ၎င်းငျး၏ ဦးစားပေးအကွောငျးအရာမြားထဲ တဈခုဖွဈသော – ရရှေညျတညျတံ့ခိုငျမွဲသညျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု အခနျးကဏ်ဍနှငျ့ပတျသကျပွီး အစီရငျခံစာမြား ထုတျပွနျထားပါသညျ။ ထိုအစီရငျခံစာမြားကို အောကျတှငျဖတျရှုပါသညျ။
ဦးစားပေးအကြောင်းအရာ။ ။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ စတင်ဆောင်ရွက်ချိန် မှစတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံသည် “နောက်ဆုံး စီးပွားရေးနယ်ပယ်” အဖြစ် ကမ္ဗည်းထိုးခံရပြီး စီးပွားရေးလျှော့ပေါ့တံခါးဖွင့်မှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်အတူ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လှိုင်းလုံးအား သယ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဥပဒေရေးရာ မူဘောင်မှာမူ မတော်မတရား ခြယ်လှယ်ကာ ထိခိုက်မှုများလည်း ဆောင်ယူလာနိုင်ခြေရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအန္တရယ်မှ ထိခိုက်လွယ် အားနည်းသူ ပြည်သူ လူထုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ကာကွယ်မှုပေးနိုင်ရန် လုံလောက်ခိုင်မာမှု မရှိသေးသည့်အပြင် မညီမျှမှုများ ဆက်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်မလွယ်သည့် လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေ အန္တရာယ်များမှာ မြင့်မားလှပါသည်။ ထိခိုက်ပျက်စီးစေသည့် သဘာဝသယံဇာတ ထုတ်ယူမှုများ၊ မြေယာ သိမ်းဆည်းမှုများနှင့် စက်မှုဇုံများရှိ နိမ့်ကျသော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများမှာ ဆိုးရွားစွာဖြစ်နေသော ပြဿနာပေါင်း များစွာထဲမှ အချို့သာဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ပင်အကြံဉာဏ်ရယူခြင်း၊ ပူးပေါင်းလက်တွဲလုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲ၍ သာတူညီမျှမှုရှိပြီး သြဇာကြီးမားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ စစ်တပ်နှင့်ဆက်နွယ်နေသူများ၏ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ် မျှော်မှန်းမှုရန်မှ ထိခိုက်လွယ် အားနည်းသူ လူထုအသိုင်းအ၀ိုင်းများ၏ လူ့အခွင့်အရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လူသားဘ၀လုံခြုံရေးတို့ကို ကာကွယ်ပေးရေးအား အာမခံသည့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့မှ ၎င်း၏ ဦးစားပေးအကြောင်းအရာများထဲ တစ်ခုဖြစ်သော – ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခန်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ ထိုအစီရင်ခံစာများကို အောက်တွင်ဖတ်ရှုပါသည်။